Iftiinka Cagaaran, waa dhismihii ugu horreeyay ee deegaan dabiici ah ee Danmark | Safarka Absolut
Iftiinka Cagaaran, waa dhismihii ugu horreeyay ee deegaan dabiici ah ee Danmark
Lugaha Alberto | | La cusboonaysiiyay 12/07/2018 18:06 | Denmark
Ecology waxay noqotay mid kamid ah ahmiyadaha aduunka maanta, gaar ahaan marka qiiqa CO2 sii kordho, madaxweynayaasha qaar ayaa kasoo horjeeda inay aaminaan inuu jiro isbedelka cimilada iyo tirada dadka oo badan ayaa nagu qasbeysa inaan qaadno talaabooyin cusub oo lagu xakameynayo deegaanka. Denmark, sida deriskeeda kale ee Waqooyiga Yurub, waxay sii wadaa inay tusaale u noqoto shaqadeeda wanaagsan ee waara, iyadoo ah mid gaar ah Iftiinka Cagaaran tusaalihii ugu fiicnaa ee xilligan cusub ee waara.
Iftiinka Cagaaran: dhismayaasha waara
Muhiimadda ay leedahay in lagu dabaqo tallaabooyin cusub oo waara oo ku saabsan magaalooyinka ayaa noqotay muhiimadda marka wasakheynta magaalooyinka waawayn ay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kiciya isbeddelka cimilada ee waddamada iyo shirkadaha qaarkood ay billaabeen duulaan dhammaystiran sannado, in kasta oo ay weli wax badani dhiman yihiin la sameeyo.
Waqooyiga Yurub ayaa suuragal ah inay ka mid tahay meelaha adduunku aad uga warqabo xaqiiqadanMarka la qiimeeyo joogtaynta dalalka sida Norway, Sweden, Finland ama sidoo kale Danmark, oo loo arko inay tahay dalka ugu farxad badan adduunka Sida laga soo xigtay sahan ugu dambeeyay ee la sameeyay 2016, mid ka mid ah sababaha ayaa tusaale u ah sida Faro Verde, oo ah dhisme la furay sanadkii 2009 loona badalay xarunta dhexe ee kuliyada sayniska ee jaamacada Kobanheegan.
Iftiinka Cagaaran ee Kobanheegan ayaa ku saabsan Dhismihii ugu horreeyay ee Danmark wuxuu noqdaa mid si buuxda u waara, lagu siiyay shahaadada Mareykanka LEED Dahab: LEED (Hoggaanka Tamarta iyo Naqshadaynta Enviromental, ama Hogaamiyaha Tamarta iyo Naqshadeynta Deegaanka) iyo sidoo kale Dahab, mid ka mid ah shanta heer ee shahaaddadan, oo lagu gaadhay iyada oo 68 dhibic laga helayo ka hor ururka masuulka ka ah.
Waxaa loo qaatay qaab dhismeedka deenishka oo midabbo jilicsan leh, Greenhouse-ka waxaa dhisay shirkadda Christensen & Co waxayna ku kacday 47 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Dhismaheeda ma qaadan in ka badan hal sano oo geedi socod ah.
Iftiinka Cagaaran wuxuu leeyahay qaab dhululubad ah, oo magdhabaya dusha ugu yar oo muggiisu weyn yahay, oo loo hibeeyay jawi gudaha ah oo cadaan iyo ilko-wadaag leh oo qorraxdu had iyo jeer dhex gasho. Waana haddii aan fiiro gaar ah u yeelo saqafka kore ee dhismaha, waxaan xaqiijin doonnaa inuu u janjeedho xagga koonfureed sabab ahaan: ururi qadarka ugu badan ee falaadhaha qorraxda si loo helo nidaamka tamar ku filan.
Tani waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waara ee dhisme si buuxda u iftiimiya qorraxda dabiiciga ah maalintii, halka daaqadaha furan ay fududeeyaan hawo caqli badan oo ka faa'iideysata dabeylaha xeebta ee dalka Danmark. Dhammaan tamartaas ayaa la uruuriyay, habeenkii, u oggolaanaysa dhismaha in la iftiimiyo ardayda iyo macallimiintuna way sii wadi karaan inay ka faa'iideystaan ​​xarumaha Kulliyadda.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan hirgelinta, Greenhouse-ka Danmark keydi ilaa 75% wadarta tamarta, Guul u ah waxa ugu horreeya ee kaarboon kaarboon ah ee ka dhisma Danmark iyo moodeel ku habboon in la raaco marka ay timaaddo sii wadista hirgelinta sii wadista ka sii wanaagsan ee waddooyinka magaalooyinka oo keliya ma aha dalka yar ee 'The Little Mermaid', laakiin meel kasta oo adduunka ah.
- Iyadoo Greenhouse House-ka uu noqonayo dhismihii ugu horreeyay ee la caddeeyo inuu waarayo Danmark, ayaa waxaa soo ifbaxay calaamado muhiim ah marka la sameynayo xiriir ka dhexeeyo hay'adaha dowliga ah iyo shirkadaha si loo gaaro natiijooyin gaar ah oo ku saabsan deegaanka. Qiimeynta Dahabka ayaa sidoo kale kordhisa fahamka iyo xiisaha loo qabo shahaado waarta oo laga helo warshadaha dhismaha, taas oo muhiim ah iyadoo la tixgelinayo in dhismayaasha Yurub ay sababaan 40% dhammaan qiiqa CO2, si ay u sameyso suurtagal weyn oo horumar ah, ”ayuu yiri Martin Lidegaard Wasiirka Cimilada, Tamarta iyo Dhismaha iyo markii dambe Wasiirka Arimaha Dibada ee Denmark waqtigaas.
Erayo kooban oo aan waxba qabanaynin laakiin inaga dhaadhicinaya baahida loo qabo in laga hirgeliyo horumarin cusub magaalooyinka magaalooyinka adduunka oo dhan ma aha oo keliya hab lagu daryeelayo deegaanka, laakiin sidoo kale in la dejiyo tusaale bulsho, si adduunka looga wacyi geliyo u baahan tahay in sida ugu dhakhsaha badan loola dagaallamo isbeddelka cimilada.
Sideed u aragtaa laydhkan cagaaran?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Iftiinka Cagaaran, waa dhismihii ugu horreeyay ee deegaan dabiici ah ee Danmark